Laptọọpụ HP kacha mma n'ọnụ ahịa kacha mma, kedu nke ị ga-azụ na 2022?
HP, nke tọrọ ntọala dị ka Hewlett-Packard na 1939, bụ nnukwu teknụzụ ama ama maka ọtụtụ ngwaahịa ya, gụnyere ndị nbipute ya, nyocha ya, na ngwọta azụmahịa ya. Ma e nwere ebe ọ na-ewu ewu ọbụna karị: nke kọmputa. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere Akwụkwọ ndetu HP, nke ụfọdụ ụdị na usoro ha ka ị mara nke kachasị mma maka mkpa gị.
Laptọọpụ HP-255 G8...
1 Laptọọpụ HP kacha mma
1.3 Egwuregwu HP Pavilion
1.5 HP 14s
1.6 HP anyaụfụ 13-ah0005ns
2 Kọmpụta HP ọ dị mma?
3 Ụdị akwụkwọ ndetu HP
3.1 hp akwụkwọ
3.2 HP Specter
3.4 Anyaụfụ nke HP
3.7 OMEN nke HP
3.9 HP dị mkpa
4 Ajuju ajuju ajuju
4.1 Otu esi kpọghee òké touchpad na laptọọpụ HP
4.2 Otu esi ese nseta ihuenyo na laptọọpụ HP
4.3 Otu esi ahazi kọmpụta HP
4.4 Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na laptọọpụ HP agaghị agbanye?
4.5 Gịnị ma ọ bụrụ na ọkụ okpu agbanwughị wee gbuo?
5 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ HP dị ọnụ ala
5.2 Ụlọikpe Bekee
Laptọọpụ HP kacha mma
HP 15s-fq1089ns bụ kọmpụta nke ị nwere ike iji mee ihe niile na-ahapụghị obere akpa gị. Na ihuenyo 15'6 ″, ị ga-enwe ike ịhụ ọdịnaya karịa na kọmputa ndị ọzọ nwere obere ihuenyo, wee hụ ya nke ọma maka ekele ya. mkpebi 1920 × 1080 Nke ahụ na-apụta nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị na-eji enyo enyo dị ala / mkpebi dị ala.
Nrụ ọrụ amamihe dị na ya, laptọọpụ a na-ejikọta AMD Ryzen processor na 8GB nke RAM na 256GB na SSD (E nwekwara ya na dum nso nke Intel processors), ya mere, na nkịtị aga-eme (na-abụghị ọkachamara 8K video edezi) anyị ga-enwe ihe onwunwe iji chekwaa. Sistemu arụ ọrụ na faịlụ niile dị mkpa ga-adaba na draịvụ ike 512GB SSD nke mere na ịnweta ha na-adị ngwa ngwa, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oghere ngwa ngwa ngwa ngwa.
Sistemu eji arụ ọrụ gụnyere na kọmpụta a bụ a Windows 10 Home nke, n'echiche m, bụ mmelite nke mere ka ọ dịkwuo mma, ma na interface ya na n'ọrụ ya. N'ezie ọ bụ laptọọpụ HP akwadoro.
HP 15-da1013ns bụ laptọọpụ ngosi 14 inch emebere maka a vasatail home were. O nwere mkpebi nke 1920 × 1080 nke zuru oke maka ọrụ ndị ọkachamara, mana ọ zuru oke maka ọtụtụ ọrụ nkịtị nke onye ọrụ nkịtị.
Nchikota nhazi 5th Gen Intel isi iXNUMX quad-core, 16GB nke RAM na 1TB SSD draịvụ ike ga-enye arụmọrụ dị ịrịba ama n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụrụhaala na anyị anaghị arụ ọrụ na-achọsi ike dị ka idezi vidiyo UHD ma ọ bụ ọdịyo ọwa ọtụtụ.
Dịka anyị kọwara, ọ bụ kọmpụta emere maka iji ụlọ na sistemu arụ ọrụ nke ha tinyere na-atụ aka na ntụzịaka ahụ: Windows 10 Home, onye ikike ya ga-enye anyị mmelite ruo mgbe Microsoft hapụrụ ụdị Windows nke iri.
Egwuregwu HP Pavilion
The HP Pavilion Gaming bụ kọmputa maka ndị chọrọ a Laptọọpụ egwuregwu egwuregwu buru ibu na-emefughị ​​nnukwu ego. Ihuenyo bụ 16,1 sentimita asatọ, nke ga-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ma ọ bụ nwee mmasị na ọdịnaya multimedia na egwuregwu na nnukwu ohere karịa na nlekota ndị ọzọ. Mkpebi a bụ Full HD, nke emebere maka iji na-achọsi ike.
N'ihe gbasara arụmọrụ, a haziri akwụkwọ ndetu maka ndị chọrọ ọsọ ọsọ: processor ya bụ a Intel Core i7-10750H na cores isii ga-enye gị arụmọrụ zuru oke, nke yana eserese Nvidia GTX1650Ti, na-eme ka ọ bụrụ laptọọpụ egwuregwu dị oke ọnụ ahịa.
Na ngalaba ebe ọ ka mma bụ na ebe nchekwa RAM ya, 16GB DDR4, yana na diski ike ya, dịka ọ gụnyere. 1 TB nke SSD. Ọ gụnyere Windows 10 Home 64-bit nke na-agagharị n'efu na enweghị nsogbu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ PC dị ọnụ ala, ị ga-elele HP Stream 14-cb099ns. Ọ nwere nnọọ oké ọnụ price na nke a ha na-achọghị àjà ukwuu size na a Ihuenyo nke na ihe nlereanya a bụ 14 inch. Mkpebi 1366 × 768, dị ka ihe niile dị na kọmpụta a, ezubere maka iji ụlọ na-abụghị ọkachamara.
Emebere akwụkwọ ndetu HP a ka ọ rụọ ọrụ dị arọ ma ọ bụ kpọọ aha ndị na-achọsi ike. Na-abịa na Intel Celeron n3060 dual-core processor, 4GB Ram DDR3L na diski eMMC 64GB, ha niile na nkọwapụta ewepụtara na-eche echiche nke ibuga ngwaọrụ akụ na ụba nwere nha ihuenyo dị mma.
Sistemụ arụmọrụ ọ gụnyere bụ Windows 10 Home na ọ na-eme ya nke ọma, mana ọ ga-arụ ọrụ nke ọma na ụfọdụ distro Linux dị fechaa. N'ebe ahụ ka m na-ahapụ aro.
Dị ka ọtụtụ kọmputa sitere na ụlọ ọrụ a, a na-emepụta HP Pavilion 14 ka ọ rụọ ọrụ ọ bụla nke na-abụghị ihe na-achọsi ike dị ka ndezi vidiyo ọkachamara nke na-achọkwu ihe onwunwe. Ihuenyo 14 ″ nwere mkpebi 1920 × 1080 Ọ ga-enye anyị ohere ịhụ ọdịnaya dị elu, ihe a na-enwe ekele ma ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, anyị chọrọ dezie ihe oyiyi.
Otu n'ime ike nke otu a bụ 512GB SSD hard drive nke, ọ bụrụ na anyị azụta ya iche, nwere ọnụ ahịa ruru otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ọnụahịa kọmputa.
Ihe nhazi etinyere na akụrụngwa a bụ quad-core Intel Core i5-1035G1 ruo 3.6GHz na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ na mgbaze. Na 512GB nchekwa Anyị nwere ike itinye ụdị faịlụ niile, gụnyere ihe nkiri na egwu anyị.
Nkọwa dị ịrịba ama nke kọmpụta a bụ na ọ na-abịa enweghị sistemụ arụmọrụ, eleghị anya, ịzenarị iji ikikere sistemụ Microsoft mee ka ọnụ ahịa ya buru ibu. Anyị nwere ike ịwụnye Windows 10 ma ọ bụ nkesa Linux ọ bụla masịrị anyị, yana sistemụ Unix ndị ọzọ.
HP anyaụfụ 13-ah0005ns
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ dị ntakịrị karịa, nke ga-enye anyị ohere ịrụ ọrụ dị arọ karị, HP Envy 13-ba0002ns nwere ike ịmasị gị. Gafere nha nke 13.3 ″ ihuenyoMkpebi ya bụ otu n'ime ndị m ga-akpọ nke ọma, 1920 × 1080.
Mana ebe HP a pụtara n'ezie bụ na ihe ọ bụla ọzọ: processor ya bụ a Intel mojuto i7-1065G7 quad-core nke anyị nwere ike iji meghee ngwa ma rụọ ọrụ ndị ọzọ na ntugharị anya. Mmiri mmiri bụ ihe anyị ga-ahụkwa ekele maka ịgụ / ide ọsọ nke SSD disks nyere, 1TB n'ihe banyere otu a. Banyere ebe nchekwa, o nwere ihe dịka 8GB nke RAM nke ga-enye anyị ohere ịkwaga nke ọma Windows 10 Home 64 nke ọ gụnyere dị ka sistemụ arụmọrụ.
HP anyaụfụ 13-ba0002ns -...
Kaadị eserese ya bụ Intel Iris Plus 2GB GDDR5, nke siri ike nke na ekwurula ya na enwere ike iji ya kpọọ aha dị mkpa na nke na-achọsi ike na kọmpụta nwere ọkụ. Ma ọ bụ na laptọọpụ a dị naanị 1.3kg.
Kọmpụta HP ọ dị mma?
Mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike ịza azịza na-ada ụda, ajụjụ a bụkwa ezi ihe atụ nke a. A ga-achọta azịza ya site n'ileba anya n'oge gara aga yana otu n'ime mwepụta ọhụrụ. HP bụ ụlọ ọrụ nwere ọnọdụ dị mkpa na n'ime afọ 80 ọ nwere ọganihu na ọdịda ya. Azịza nye ajụjụ ahụ bụ ee, ya ọ nwere ezigbo kọmpụta na ndị ọzọ nwere akọ dabere na ego anyị chọrọ ime. O nwere oge a tọhapụrụ obere kọmpụta, mana nke ahụ dị n'azụ anyị.
Enwere kọmputa HP maka ụdị onye ọrụ ọ bụla. N'otu akụkọ a, anyị ekwuola maka laptọọpụ 300 € na nke karịrị € 1000, ha abụọ nwere ọnụ ahịa mbelata maka ịnọ na mbelata. Ihe dị mma gbasara HP bụ na na katalọgụ ya, anyị na-ahụ kọmpụta nwere ọgụgụ isi karịa maka ndị na-achọghị itinye nnukwu ego na laptọọpụ na ndị ọzọ dị ike karịa nke ga-enyere anyị aka ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọrụ ọkachamara niile, yabụ ee. , Laptọọpụ HP dị mma… Ma ọ bụ akọ. Ị họrọ.
Ụdị akwụkwọ ndetu HP
Ewebata usoro ZBook nke HP na 2013 ma bụrụ nke onye ga-anọchi HP EliteBook. Asọmpi ya bụ nkenke na ThinkPad sitere na Dell na Lenovo n'otu n'otu. Ha nwere kaadị NVIDIA Quadro na AMD FirePro na njikọ Thunderbold. Ha dịkwa na ihuenyo mmetụ aka.
Ọ bụ ihe ụlọ ọrụ echiche ịrụ ụdị ọrụ niile n'ụzọ dị mfe, gụnyere ndezi vidiyo (abụghị ọkachamara / studio).
Specter bụ kọmputa na ezinụlọ Envy. Ọ gbasara Ultrabooks na ụfọdụ n'ime ha nwere ike iji ma dị ka kọmputa na mbadamba, ihe dị ka "HP Surface." Ha bụ ngwá ọrụ dị ike, nwere ezigbo ihuenyo na ọkụ, ma ha nwere ọnụ ahịa na-adabaghị na akpa niile.
Usoro HP Elitebook bụ bu ụzọ karịa usoro ZBook. Ndị a bụ ọdụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị imepụta n'okpuru aha a na 2013. Ha bụ kọmpụta emere maka iji azụmaahịa nwere njirimara na ọnụahịa dị elu karịa nwanne ya nwoke nke obere, ProBook.
Anyaụfụ nke HP
HP Envy bụ usoro akwụsịla, ma ọ bụ kama Aha ya bụ HP Pavillion. Na ya katalọgụ anyị nwere ngwakọ kọmpat kọmputa niile nha, ma na ihuenyo ma na nchekwa, nke ana achi achi na a ga-mgbe otu na-egbo anyị mkpa, dị ka ogologo oge dị ka anyị na-achọghị ime ka a na-achọ ọkachamara ojiji.
ProBooks bụ akụrụngwa ezubere maka iji azụmaahịa. Ha dị ka obere nwanne EliteBook, ma na ọnụahịa na arụmọrụ. Ha dị na ihuenyo sitere na 13 "ruo 15.6".
HP Streams bụ obere kọmputa nke nnukwu ihuenyo ruru 14 inch. Emebere nkọwapụta ya maka iji ihe na-achọsi ike, kama ịbụ kọmpụta maka iji ụlọ nke m ga-ekwu dị ka ihe anyị na-eji mbadamba mbadamba, mana na sistemụ arụmọrụ Windows 10 na keyboard nke ga-enye anyị ohere ịme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla. ọrụ. desktọpụ.
OMEN nke HP
Enwere ike ịsị na OMEN ha abụghị otu ndị nwere uche, yabụ ọnụahịa ya agaghị abụkwa. N'otu aka ahụ ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta ebe ọrụ, ọ na-emepụtakwa ha maka egwuregwu vidiyo.
Ndị OMEN bụ kọmpụta nke akụrụngwa kacha nwee uche dị gburugburu € 1.000, mana n'ihi na ọ gụnyere ezigbo processor, draịvụ ike SSD, 8GB nke RAM na ihuenyo 15 ″. Ha nwekwara nhazi pụrụ iche, n'ime nke anyị na-enwe keyboard mgbe ụfọdụ nwere ọkụ nwere agba. HP na-ere ha dị ka Laptọọpụ egwuregwu.
HP Pavillion bụ kọmpụta ndị ahụ ha nwere ihe karịrị iri afọ abụọ n'azụ ha. Ha bụ kọmpụta ndị na-egwuri egwu n'otu egwuregwu Acer's Aspires, Dell's Inspiron na XPS, Lenovo's IdeaPads na Satellite Toshiba.
N'ime katalọgụ ya, anyị ga-ahụ ụdị kọmpụta niile dị n'ogo dị elu karịa obere kọmpụta na nke dị n'okpuru ebe ọrụ kachasị achọ. Anyị ga-ahụkwa ha nwere ihuenyo site na 10.1 ″ ruo 17.3 ″.
HP dị mkpa
Ihe dị mkpa HP bụ kọmputa AIO, ya bụ, ha nile n’otu, ma ha anaghị ebugharị. Ha bụ kọmputa desktọpụ (nleba anya-kọmputa, kiiboodu na òké) na n'ime katalọgụ ha, anyị na-ahụ akụrụngwa nwere uche ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ha ga-ebugharị Windows 10. Ha dị na enyo ruo 24 ″
Otu esi kpọghee òké touchpad na laptọọpụ HP
N'ezie, òké ma ọ bụ trackpad na HP akpọchighị ya, mana ọ nwere nkwarụ. Anyị ga-amara na anyị nwere HP touchpad nwere nkwarụ ma ọ bụrụ na anyị na-ahụ ìhè na aka panel, na-emekarị acha anụnụ anụnụ, oroma ma ọ bụ odo. Ìhè a na-agwa anyị na anyị nwere ike iji kọmputa anyị na-arụ ọrụ n'atụghị egwu na esemokwu dị na panel aka ga-ewepụ ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na anyị agbanyụla ya na mberede, anyị nwere ike megharịa ya site na ịpị ọkụ ugboro abụọ, ebe ọ nwere ihe mmetụta aka.
Otu esi ese nseta ihuenyo na laptọọpụ HP
Nke a anaghị adabere na akara nke kọmputa, kama na sistemụ arụmọrụ.
Na ụdị Windows ochie, pịa bọtịnụ Bipụta ma ọ bụ Prnt Scr.
Na Windows 10, ka ịse nseta ihuenyo anyị ga-pịa igodo META (Windows) + Ihuenyo mbipụta ma ọ bụ Prnt Scr.
Na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ ọ nwere ike ịdị iche, mana ọ na-ejikọkarị ya na otu igodo.
Otu esi ahazi kọmpụta HP
Akwụkwọ ndetu HP dị ka kọmpụta ọ bụla ọzọ, yabụ Usoro ga-abụ otu ihe ahụ na ọtụtụ kọmputa:
Anyị na-etinye CD nwụnye nke sistemụ arụmọrụ anyị chọrọ ịwụnye, nke a na-ahụkarị bụ Windows.
Anyị anaghị emetụ igodo ọ bụla aka, nke ga-eme ka ọ si na CD pụta.
Ozugbo anyị malitere na CD, anyị ga-agwa ya na anyị chọrọ ịrụ ọrụ ọhụrụ.
Anyị na-ahọrọ diski ebe anyị chọrọ ịwụnye sistemụ arụmọrụ, anyị na-anabata ma chere. Kọmputa ahụ nwere ike ịmalitegharị ọtụtụ oge ruo mgbe arụchara ya.
Ozugbo arụnyere sistemụ arụmọrụ, ọ bara uru ịwụnye mmelite niile dị, ebe enwere ike ịnwe ụfọdụ metụtara ngwaike nke akụrụngwa anyị.
Ọ bụrụ na laptọọpụ HP anyị enweghị CD mbanye, ihe anyị ga-eme bụ imepụta USB nwụnye, nke anyị nwere ike iji ngwaọrụ ndị dị ka. Rufus ma ọ bụ WinToFlash. Ihe dị iche n'etiti usoro a na nke gara aga bụ maka wụnye usoro site na pendrive Anyị ga-abanye na BIOS ma mee ka nhọrọ nke na-enye anyị ohere ịhọrọ ebe anyị ga-esi malite, ihe a na-emekarị site na ịpị Fn + F12 mgbe ị na-agbanye kọmputa.
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na laptọọpụ HP agaghị agbanye?
Na kọmputa anaghị agbanye abụghị ihe nkịtị. Ọ pụtara na anyị anaghị ahụ ọkụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na ihuenyo, nke na-emekarị metụtara nsogbu ngwaike (anụ ahụ). Ọ bụrụ na HP gị agbanyeghị, anyị ga-elele ihe ndị a:
Na eriri ike dị n'ọnọdụ dị mma.
Batrị Batrị ngwaọrụ eletrọnịkị anaghị anwụ anwụ ma nwee ike daa n'ime ọtụtụ afọ. Otu ụzọ isi chọpụta na nsogbu dị na batrị bụ, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, iwepụ ya na jikọọ kọmputa na eriri ọkụ.
Motherboard. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ime ya n'onwe anyị, anyị ga-ebuga kọmputa ahụ na onye ọkachamara ka ọ lelee nke a na isi ihe na-esote.
The ike mbanye. Ọ bụ ezie na ọ bụghị na mbụ, ọ nwere ike ime ka ọ daa ma mee ka kọmputa jụ igosi ihe omume.
Na nkenke, ọ bara uru ịlele otú ọ dị mfe (batrị na eriri) na, ọ bụrụ na anyị ahụghị ihe ọ bụla dị ịtụnanya, buru ya gaa na ọkachamara.
Gịnị ma ọ bụrụ na ọkụ okpu agbanwughị wee gbuo?
Ọ bụrụ na kọmpụta agbanwughị ma nnukwu ọkụ na-enwu, kọmpụta agbanwuola n'ezie mana enweghị ike igosipụta onyonyo n'ihi na. kaadị vidiyo agbajiri. Ihe ọzọ nwere ike ime bụ na enwere nsogbu na eriri nke na-ejikọta ihuenyo na kaadị vidiyo, ma nke a siri ike karị n'ihi na ihuenyo ahụ gosipụtara nwa ojii, a ghaghị iwepụ eriri ahụ kpamkpam.
Ihe ngwọta dị "dị mfe" maka ndị na-arụ ọrụ aka, ọrụ na-agaghị ekwe omume maka ndị na-enweghị ike ịkwasa ngwá electronic. Ihu ọma ị ga-ewepụ fan na tinye okpomọkụ na mgbawa vidiyo maka ihe dịka nkeji ise, ihe anyị nwere ike iji igwe nkụ mee.
Ọ bụrụ na ị naghị anwa anwa, ọbụlagodi na-eburu n'uche na YouTube bụ ezigbo enyi anyị n'okwu ndị a, ọ kacha mma iburu kọmputa ahụ na ọkachamara.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ HP dị ọnụ ala
Amazon bụ a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ị ga-eburu n'uche mgbe niile. N'ime ya, anyị nwere ike ịhụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ ọ bụla enwere ike izipu site na ụlọ ọrụ na-ebufe, site na eriri USB dị mfe na telivishọn. N'ezie, ọ bụ ezie na nke a abụghịzi nke kasị mma, anyị nwere ike ịzụta ihe ndị dị ka ịnyịnya ígwè. Dị ka ụlọ ọrụ dị mkpa, ọ na-ekwurịta ọnụ ahịa dị mma na ụdị na ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma ịzụta kọmputa HP, yana ndị na-ebi akwụkwọ nke otu ụdị.
El Corte Inglés bụ ụlọ ọrụ pụtara ìhè maka ụlọ ahịa ngalaba ya. Ọ na-arụ ọrụ na Spain na Portugal wee bụrụ otú ahụ dị mkpa na mba na o nwere kaadị kredit nke ya na-anabata n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. N'ebe ahụ, anyị ga-ahụ ụdị isiokwu dị iche iche, ma ọ pụtara maka uwe ya na akụkụ ngwá electronic. Na ngalaba eletrọnịkị anyị ga-ahụ kọmpụta, n'ime ha bụ ndị sitere na HP.
Mediamarkt bụ ụlọ ọrụ German nke ruru mba ndị dị ka Spain n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya. Ndị a bụ ụlọ ahịa anyị nwere ike ịkpọ dị ka nnukwu ụlọ ahịa, mana naanị n'ihi nha ha. Ọdịiche dị n'etiti Mediamarkt na ụlọ ahịa ndị ọzọ bụ nke ụlọ ọrụ German na-elekwasị anya na ngwa eletrọnịkị, n'ime nke anyị nwere ngwa ụlọ, ngwá electronic na kọmputa. Ọ bụ na ngalaba ikpeazụ ebe anyị ga-ahụ ma kọmputa HP na ngwaahịa ndị ọzọ sitere na otu ụlọ ọrụ, dị ka ngwa nbipute ma ọ bụ nyocha.
Carrefour bụ yinye nkesa mba dị iche iche dabere na France ama ama maka ya ụlọ ahịa. N'ime ụlọ ahịa ya, anyị ga-ahụ ụdị akụkọ dị iche iche, yabụ anyị nwere ike ịzụrụ ihe niile n'ebe ahụ n'agbanyeghị ihe anyị na-achọ: uwe, nri, ngwaọrụ eletrọnịkị ... Kọmpụta HP ga-echere gị na shelf Carrefour na, dị ka. ihe niile ha na-enye, na ọnụ ahịa dị mma.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Akwụkwọ ndetu HP